UMnu Barend Pretorius (kwesobunxele) noDkt Brett van Niekerk.
UDkt Brett van Niekerk, umfundisi omkhulu wase-School of Mathematics, Statistics and Computer Science, noMnu Barend Pretorius, owenza iziqu zobudokotela, bangabanye abali-15 ukuthola igama lezokuphepha kwi-inthanethi, igama elaziwa ngokuthi yi-Information Security Management Professional (i-ISMP).
Leli gama lisanda kwethulwa yi-ISACA South Africa Chapter ukufakazela ulwazi, amakhono namava kulo mkhakha okuhambisana nendlela yokwenza izinto ye-SAQA.
I-ISACA South Africa Chapter yiyona enkulukazi e-Afrika, njengoba inamalungu ayizi-2 000. Kudala yayaziwa nge-Information Systems Audit and Controls Association kanti inamalungu ayizi-145 000 emhlabeni kanti ihlanganise iminyaka engama-50 ngonyaka wezi-2019.
Ngokwe-ISMP, abantu kufanele baqale babe yi-Certified Information Security Manager ngokuthola isitifiketi se-CISM, esitholakala kwi-ISACA, ngaphezu kokwenza umsebenzi ofanele. UDkt van Niekerk wathola indondo ngokuba ngowesithathu ukuthola amamaki amaningi ekuhlolweni kwe-CISM. Lezi zicucu zigunyaza abantu ngolwazi olumqoka kwezokuphepha kwi-inthanethi kusukela ekuphathweni kwezindaba zayo, ulwazi lokuphathwa kobungcuphe nokuhambisana nemigomo, ukwenziwa nokuphathwa kwezinhlelo zezokuphepha nokuthatha izinyathelo uma kunengozi.
Phesheya nakuleli amakhono ezokuphepha asedingeka kakhulu kunakuqala kuyona yonke imikhakha. Emhlabeni jikelele, ukuphepha kolwazi nakwi-inthanethi kuthathwa njengamakhono anqabile. Izicucu ezinjenge-CISM kulo mkhakha zehlukile kweminye nokusiza ukuvala igebe lamakhono ngenkathi zihlomisa abantu nezinhlangano ngolwazi oludingekayo ukuzivikela. Igama le-ISMP liqhakambisa labo abanala makhono eNingizimu Afrika.
U-van Niekerk no-Pretorius basanda kukhuluma kwi-ITWeb Security Summit ebihlelwe ngobuchwepheshe besimanje, lapho bebekhuluma khona ngesihloko nge-Industrial Internet of Things. U-van Niekerk uphinde wakhuluma kwi-UKZN Big Data breakfast, lapho ekhulume khona ngezigameko zokuphepha kwi-inthanethi eNingizimu Afrika.